Suniel Shetty oo baraha bulshada ku dhaleeceeyay weerarkii dadka Muslimiinta ahaa Masaajid ku yaalo New Zealand lagu xasuuqay – Filimside.net
Suniel Shetty oo baraha bulshada ku dhaleeceeyay weerarkii dadka Muslimiinta ahaa Masaajid ku yaalo New Zealand lagu xasuuqay
Rug cadaaga Bollywood-ka Suniel Shetty ayaa noqday jilaaga ugu horeeyay ee Bollywood-ka ka tirsan kaasi oo ka hadlay xasuuqii loo geestay dadkii Muslimiinta ahaa salaada Jimcada ku tukunayeen labo masaajid ku yaaliin dalka New Zealand.
Weerarkan argagaixiso waxaa lagu dilay 49-qof halka 50-qof ku dhawaadna lagu dhawaacay waana weerar wuxuushnimo oo aad u saameeyay dunida siyaabo kala duwanna looga hadlaayo.
Haddaba Suniel Shetty ayaa bartiisa Twitter-ka kaga hadlay dhacdadan xauunka badan wuxuuna yiri “Waan ka naxay! Waan dhaleeceynaa weerarka bahalnimada ah ee lagu qaaday labada masaajid ku yaaliin xaafada Christchurch, New Zealand. Qalbiga ayaan kaga duceenayaa qoysaska dhibaatada xoogan soo gaartay.”
Si la mid ah ruug cadaa Suniel Shetty gabadhiisa Athiya Shetty ayaa iyadana barteeda Twitter-ka kaga soo hadashay dhibaatadii Muslimiinta New Zealand ku nool loo geestay waxayna tiri “Waa maalin murugo badan. Qalbiga ayay naga dhaawacday arintaan waa ficil midkii ugu xumaa ee dunida ka dhaco. Qalbigeyga iyo ducadeyda waxay la jirtaa dadkii dhibaatada gaartay iyo eheladii waayeen dadkii ay jeclaayeen.